Posted on 10 / 26 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Amin'ny maha analogue testosterone (ny mitovy aminy dia mitovy amin'ny testosterone), ny Anavar dia manetsika ireo mpitrandraka nokleary manokana ary mamatotra azy ireo toy ny fomba fanaon'ny testosterone. Noho izany dia mety ilaina ny fitsaboana fanoloana testosterone.
Oxandrolone (Anavar) vovony (53-39-4) dia azo ampiasaina amin'ny lahy sy vavy rehefa mifamatotra ny fatra marina. Ny tsara kokoa, ny vokatra azo avy amin'izany dia matetika malemy fanahy. Noho izany dia iray amin'ireo vahaolana vahaolana ho an'ny olona mijaly amin'ny aretim-piraisan'ny VIH na hypogonadism lahy satria manatsara ny fitazonana ny azota ary koa ny hozatra matavy tsy misy tavy.
Oxandrolone (Anavar) no namaritana voalohany tamin'ny taona 1964 tao amin'ny Searle Laboratories (subsidiary Pfizer ankehitriny). Mpamokatra zava-mahadomelina hafa toa ny Celebrex, NutraSweet ary Ambien ihany koa ity orinasa ity. Ny famoronana ny fiaraha-miasa amin'ny Raphael Pappo sy Christopher J. Jung.
Ny manam-pahaizana momba ny fikarohana dia sahiran-tsaina tamin'ny otrikaretina androgenôly mahery indrindra any Oxandrolone amin'ny fifandraisana amin'ny fiantraikany amin'ny zava-mahadomelina. Izy ireo taty aoriana, tao amin'ny 1964, dia nampiditra ny fanafody toy ny fanafody fanafody ho an'ny fampiroboroboana ny fihenan'ny hozatra amin'ny olona manana fatiantoka mavesatra ary koa ny fitsaboana amin'ny SIDA.
Nandritra izany fotoana izany, ny fanafody ny anabolic steroid dia amidy eo ambanin'ny marika maro isan-karazany, ao anatin'izany ny Genesis Oxandrolone ary Oxandrin, manerantany. Na izany aza, nohamafisina taty aoriana ilay anarana marika amerikanina ankehitriny, Anavar.
Rehefa nandeha ny fotoana, dia nankatoavin'ny Oxandrolone ho an'ny satan'ny zaza kamboty ny Oxizololone ho an'ny satan'ny zaza kamboty, ho fitsaboana ho an'ny Turner Syndrome, fihenan'ny lanjan'ny tsimok'aretina VIH ary koa ny fihenan'ny lanjan'ny VIH.
Ny vidin'ny oxandrolone mahazatra dia avo. Noho izany, raha sendra mpivarotra mivarotra ilay zava-mahadomelina amin'ny vidiny 'fihenam-bidy lalina' ianao dia tadiavo raha mahita ny fahazoan-dàlana mivarotra sy miasa ao amin'ny ara-dalàna mba hahazoana antoka fa tsy miafara amin'ny vokatra contraband ianao.
Anavar / Oxandrolone dia menaka lafo vidy hividianana azy, ary am-peratra amin'ny ankapobeny amin'ny fividianana azy amin'ny mpivarotra no manolotra azy amin'ny vidiny fihenam-bidy lalina. Azonao atao ny mijery Hevitra Anavar hahitana raha miasa amina rafitry ny fomba ara-dalàna ny mpivarotra ary raha ny vokatra ny maha-izy ny tena marina. Ny famerenana anavar dia afaka manome anao hevitra ihany koa momba ny toerana tsara indrindra hividianana ny fanafody.
Any Etazonia, ny Lalàna mifehy ny Zava-mifehy no manasokajy ny Oxandrolone / Anavar, anisan'izany ny androgen sy ny anabolic maro hafa ho toy ny singa mifehy ny fandaharam-potoana III. Izany no dikan'ny hoe ny olona iray tsy maintsy maka izany amin'ny alàlan'ny dokotera manam-pahaizana sy ny fivarotam-panafody.
Any UK, Oxandrolone dia iray amin'ireo akora voafehy voasokajy ao amin'ny Fandaharana IV; ireo steroid rehetra anabolika dia tafiditra amin'ity sokajy ity.
Saingy, ny lalàna kanadiana an'ny Kanada dia manana lava-bato milaza fa ny olona iray ao amin'ny firenena dia tsy mahazo mividy ny zava-mahadomelina raha tsy manazava ny antony tian'izy ireo hividy izy ireo. Arakaraka ny antony nomena, ny mpivarotra dia mety hanaiky na hanilika ny fangatahana mividy. Fiezahana hividianana ny steroid dia tokony ho arahan'ny andro 30 farafaharatsiny alohan'ny hanaovana izany.
Ny toerana tokana ahafahanao mividy ara-dalàna sy avo lenta Anavar dia avy amin'ny mpivarotra nahazoana alalana sy ara-dalàna. Amin'izany fanamarihana izany dia ny AASraw no toerana tsara indrindra ahafahana manome loharano ny vokatra.
Ny AASraw dia miady amin'ny synt synture sy famokarana Oxandrolone ary noho izany dia afaka manome anao ny habetsaky ny Anavar for sale na ajanony ny fanjifana raha toa ka manatanteraka ny zavatra takiana. Miasa eo ambanin'ny CGMP ary ny rafitra fanaraha-maso kalitao azo jerena dia manampy antsika hiasa ao anaty fehezan-dalàna sy ny lalàna mifandraika amin'izany mba hahazoana antoka fa manolotra vokatra maoderina isika.
John Cabaj, "fomba fiasa ho an'ny synthèle de oxandrolone"
Karim, A., Ranney, RE, Zagarella, J., & Maibach, HI (1973). Fanariana sy metabolism amin'ny lehilahy. Pharmacology & Therapeutics klinika, 14 (5), 862-869.
Raiti, S., Trias, E., Levitsky, L., & Grossman, MS (1973). Oxandrolone sy hormonina fitomboan'ny olombelona: fampitahana ny fiantraikan'ny fitomboan'ny fitomboan'ny zaza kely. American Journal of Diseases of children, 126 (5), 597-600.
Rosenbloom, AL, & Frias, JL (1973). Oxandrolone ho fampiroboroboana ny fitomboan'ny ratra Turner. American Journal of Diseases of children, 125 (3), 385-387.
Strauss, RH, Liggett, MT, & Lanese, RR (1985). Ny fampiasana anabolika steroid sy ny fiantraikany hita amin'ireo atleta vehivavy nampihetsi-po folo. Jama, 253 (19), 2871-2873.
Torolàlana feno hividianana 2019 Ho an'ny fananganana bodybuilding SARM SR9009	Ahoana no anampian'ny Flibanserin vehivavy iray ho toy ny hormonina firaisana ara-nofo